Man United, Juventus, Barcelona iyo PSG oo guulo gaaray & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray Champions League… SAWIRRO – Gool FM
Dajiye November 24, 2020
(Yurub) 25 Nof 2020. Waxaa caawa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan ee ka tirsan kulamada afaraad wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21.
Kooxaha Juventus, Barcelona, Manchester United, Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa ka mid ahaa kooxihii ugu muhiimsanaa ee caawa ciyaaray kulammadii koobka horyaallada Yurub.
Barcelona ayaa dhankeeda la’aanka Lionel Messi guul ka soo heshay kooxda Dynamo Kyiv, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Antoine Griezmann, Sergino Dest, iyo 2 gool oo Martin Braithwaite ah, Barca ayaana guushaan ka dhigan tahay inay u gudubtay wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Dhinaca kale Paris Saint-Germain ayaa ka adkaatay kooxda RB Leipzig oo marti ugu aheyd garoonka Parc des Princes, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, waxaana goolka u dhaliyay xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr.
Sidoo kale Juventus ayaa guul ka heshay kooxda Ferencvaros, waxayna kaga adkaatay 2-1, iyadoo goolasha ay kaga mahad celineyso xiddigigaheeda Cristiano Ronaldo iyo Alvaro Morata, naadiga reer Talyaaniga ayaa u soo baxday wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
FC Krasnodar 1 – 2 Sevilla
Paris Saint-Germain 1 – 0 RasenBallsport Leipzig.
Kooxaha Chelsea iyo Sevilla oo u gudbay wareega 16-ka ee tartanka Champions League… SAWIRRO